About Us - Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd. ibhizinesi rakazara rakazvipira kugadzira CNC router, laser muchina wehuni, PVC, acrylics, simbi, dombo, dehwe nezvimwe zvinhu zvekucheka kana kunyora kubva mugore ra2006, uye yakatanga kuita pasi rose. kutengesa kubva mugore ra 2016. Zvigadzirwa zvinonyanya kufarirwa kumba nekune dzimwe nyika, misika huru inofukidza Europe, North uye South America, Africa, Asia, Nyika zhinji nenzvimbo.
Michina yese yeCNC inofanirwa kutarisisa kwakasimba isati yatumirwa, uye yakazvipira kwazvo kutumira kunze kwenyika yakajairwa mapakeji, ayo akakodzera nzira dzekufambisa dzegungwa, dzemhepo, kana dzevatumwa.Zvigadzirwa zvinofanirwa kushandisa iyo CE, ISO, FDA chitupa kana vatengi vachida.Fekitari inovhara anenge 3000 square metres, kusanganisira yakaparadzana R&D pakati, yezvigadzirwa zvitsva R&D, yaimbova zvigadzirwa giredhi kuvandudza, izvo zvinoenderana nechikumbiro chemutengi OEM, ODM.
Kune vangangosvika mazana matatu tsvimbo, gumi nyanzvi dzeinjiniya uye gumi nemasere mainjiniya anosanganisirwa, Mushure memakore ekuenderera mberi kwekuedza uye vatengi vanotsigira kusvika nhasi, yakagadzira yekushanda sisitimu modhi yekugadzira, kugadzira, kutengesa imwe yekumira sevhisi.Vatengi vatsva uye varipo vari kupararira muSouth America yose, Middle East, Southeast Asia, Africa, Europe nedzimwe Counties nenzvimbo.
Gamuchirai shamwari dzepasirese dzinouya kuzoshanya uye tarisira imwe inoenderera mberi rutsigiro ndapota.CNC router michina vatengesi vese nevashambadziri inodiwa pasi rese zvakare.Ndatenda nekubatana neemail, whatsapp, kana kufona.
Isu tiri nyanzvi mune engraving muchina, laser muchina, optical fiber yekucheka muchina uye zvimwe zvine hukama zvigadzirwa,
Isu tiri nyanzvi yekugadzira CNC yehuni yekugadzira lathe uye muchina wekuveza.Isu tanga tichitengesa CNC lathes muChina kubvira 2009 uye kunze kwenyika kubvira 2013.
Muchina wedu une marudzi ese echitupa chemhando, isu tine mutsara wekugadzira wakura, wakazara uye nesainzi mhando manejimendi system, yakanakisa timu yekutengesa uye mushure mekutengesa sevhisi timu.
Isu tiri mukufambirana nehuchenjeri hwebhizinesi hwe "kuvimbika uye pragmatic, tungamira mberi" uye enda kumugwagwa wekubudirira uine yakakwana mushure mekutengesa sevhisi.
Tave tichitengesa CNC lathes muChina kubvira 2009 uye kunze kwenyika kubva 2013. Lathes edu anotengesa zvakanaka pasi rose, zvakadai seNorth America, Europe, Middle East nedzimwe nyika.
Parizvino, michina yedu yakapfuura CE, ISO uye SGS certification.Tine mutsara wekugadzira wakura, wakazara uye nesainzi mhando manejimendi system, yakanakisa yekutengesa timu uye mushure-yekutengesa sevhisi timu.
Gore negore huwandu hwekutumira kunze
mamiriyoni yuan +